FaayBaqatootaa Umraqubaa, Sudaan
Naannoo Benishaangul Gumuz, godinaa Matakkal keessatti tasgabii-dhabinsi eega bara 2019tii jalqabee mul’ataa ture. Tahus, garuu hookkarri naannicha keessaa baatiilee sadan dabran keessa baay’ee hammaate.
Hookkarri Benishaagul Gumuz Keessaa Namoonni Gara 7000 Gara Sudaanitti Akka Baqatan Taasise, Jedha Tokkummaan Mootummootaa
Baatiilee shaman dabran keessa, Koomishinni Mirga namoomaa Itiyoophiyaa namoonni gara dhibba shanii tahan baatiilee shan dabran keessa ajjeesamuu gabaasee ture. Kanneen keessaa namoonni dhibba lamaa ol guyyaa tokko keessatti – gaafa Mudde 23 lubbuu dhaban, jedha gabaasaan sun.
Jaarmayaa dhimma Baqattootaa ka Tokkummaa Mootummootaaf dubbi-himaa ka tahan Babaar Baalooch, hookkarri naannoo Benishaangul Gumuz keessatti hammaate sun, akka uummatni kuma hedduu tahu baatii dabre keessa achi irraa baqatee kutaa Sudaan, Biluu Naayil seenuun dahata gaafatu taasise.